सुशान्तको देहत्याग गर्नुका कारण यस्तो, ३ दिन पछि खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सुशान्तको देहत्याग गर्नुका कारण यस्तो, ३ दिन पछि खुल्यो बलिउडमा तरङ्ग ल्याउने नयाँ रहस्य !
एजेन्सी-के सुशान्त बलिउडमा परिवारवादको शिकार बनेका थिए ? अर्थात् उनले देहत्याग गर्नुको पछाडि यही परिवारवादको संरचना धेरथोर जिम्मेवार थियो ? त्यसो त, बलिउडमा परिवारवाद अघोषित रुपमा स्थापित नै छ । यो विस्तारै पारिवारिक पेशा जस्तो पनि बन्न थालेको छ ।
बलिउडकी अभिनेत्री कंगना रनौतले अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको कारण बाहिर प्रचार गरिएको जस्तो नभएको बताएकी छन्। कंगना रनौत टिम नामक ट्वीटर एकाउन्टमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले सुशान्तलाई जसरी ‘कमजोर मनोबल र कमजोर दिमाग भएको’ भनेर व्याख्या गरिएको छ, त्यो गलत भएको बताएकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘इन्जिनियरिङमा राम्रो र्‍याङ्कमा आएर छात्रवृत्ति पाएका थिए। उनले त्यत्रो संघर्ष गरेका छन् उनको दिमाग कसरी कमजोर हुन सक्छ ?’ उनले भिडियोमा भनेकी छन्, ‘सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युले हामी सबैलाई त्रसाएको छ । तर कोही मानिसहरु जो अफवाह फैलाउन एकदमै जान्ने छन्, उनीहरु भन्दैछन् की सुशान्त मानसिक रुपमा कमजोर थिए र डि प्रेशन भयो अनि यस्तो गरे। जुन युवा र्‍याङ्क होल्डर थिए, इन्जिनियरिङमा छात्रवृत्रि पाएका थिए उनको दिमागलाई कसरी कमजोर भन्न मिल्छ ?’
कंगनाले अगाडि भनेकी छन्, ‘उनको पछिल्लो पोस्टहरुमा यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ की ‘प्लीज मेरो चलचित्र हेर।’ अन्तर्वार्तामा पनि उनले भनेका छन्, ‘यो इन्डस्ट्रीमा मेरो कुनै ‘गड फादर’ छैनन्, मलाई यहाबाट निकालिन पनि सकिन्छ। मलाई यो इन्डस्ट्रीले अपनाएको छैन, म किन यहाँको जस्तो अनुभव गर्न सकिरहेको छैन ?’ उनको यो भनाईमा केही तर्क छैन ?’
कंगनाले अगाडि भनेकी छन्, ‘तपाईँ याद गर्न सक्नु हुन्न ! काय पो चे जस्तो चलचित्रबाट उदाएका यो कलाकारलाई कुनै डेब्यू बेस्ट एक्टरको अवार्ड किन दिइएन ? केदारनाथ, छिछोरे, ध्वनि जस्तो चलचित्रमा काम गरेका छन्। गलिव्याई लगायत बकवास चलचित्रलाई अवार्ड दिइन्छ तर छिरोरे जस्तो चलचित्र र त्यसका निर्देशकलाई अवार्ड दिँइदैन। काम गरिन्छ तर त्यसको कृतज्ञता खोई ?
मलाई तपाईँको केही चाहिएको छैन, तर जे काम मैले गरेको छु, त्यसको आभार मलाई किन दिँइदैन ? म आफै निर्देशन गर्छु, मेरा सुपरहिट चलचित्रलाई फ्लप भनिन्छ। म माथि ६ वटा मुद्दा लगाइन्छ, मलाई जेल पठाउन खोजिन्छ। र यिनीहरुको जो चम्चा पत्रकारहरु छन्, जो सुशान्त जस्ता कलाकारको बारेमा मा’नसिक, दुर्व्यसनी थिए भनेर लेख्छन्। सञ्जय दत्तको दु र्व्यसनी त यिनीहरुलाई धेरै राम्रो लाग्छ त ! यिनीहरु मलाई किन सन्देश पठाउँछन्, ‘तिम्रो नराम्रो समय छ, तिमी यस्तो उस्तो नभन्नु। किन मेरो दिमागमा भर्न चाहन्छन् की म आ त्मह त्या गरौँ।
सुशान्तले एउटै गल्ति गरे, त्यो भनेको उसले यस्ता कुराहरु माने। उनीहरुले भने ‘तिमी बेकार छौँ’ उनले माने। सुशान्तले उनको आमाले के भनेकी थिइन् त्यो सम्झेनन्। उनीहरुले भने, ‘तिम्रो केही हुने वाला छैन’ उनले माने। उनीहरु यहि चाहन्थे इतिहासमा यो लेखियोस कि ‘सुशान्त मानसिक रुपमा कमजोर थियो।’ उनीहरु सत्य के हो त्यो बताउने छैनन्। अब हामीलाई यो निश्चय गर्न जरुरी छ की कसले इतिहास लेख्छ।’
अभिनेत्री कंगना रनौत बलिउडकी निडर अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्छिन्। उनले खुलेरै बलिउडमा भएको नातावाद र कृपावादको विरोध गर्ने गरेकी छन्। अभिनेता सुशान्त १४ जुनमा बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा मृत भेटिएका थिए। उनले देहत्याग गरेको प्रहरीले बताएको छ।
३४ वर्षका बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृ त्युपछि चलचित्र निर्माता मुकेश भट्टले गरेको एक टिप्पणीमा केन्द्रीय मन्त्री बाबुल सुप्रियोले दुख प्रकट गरेका छन्। आइतबार निर्माता मुकेश भट्टले समाचार च्यानल ‘टाइम्स नाउ’ सँग कुरा गर्दै मुकेशले भनेका छन्, ‘सुशान्तलाई समस्या छ भन्ने आशंका पहिला नै थियो।’ मुकेशले सुशान्तलाई ‘बेचैन आ’त्मा’ पनि भने।
मकुेश भट्टले भनेका छन् कि यो खबरले उनी अचम्मित भएका छैनन्। किनभने उनलाई पहिला नै यस्तो घटना हुन सक्ने आशंका थियो। मुकेशले आफ्नो भाइ महेश भट्टलाई ‘यो केटा परविन बबीको बाटोतर्फ बढिरहेको छ’ भनेर कुरा गरेको बताएका छन्।
मुकेश भट्टले भनेका छन् कि सन् २०१२ मा आशिकी – २ र सडक – २ लिएर सुशान्त उनको कार्यालयमा कामको लागि आएका थिए तर कुरा मिलेन। भट्टले भने, ‘त्यतिबेला सुशान्त हाम्रो कम्पनीसँग काम गर्नको लागि धेरै नै उत्ताउलो देखिएका थिए। तर काम गर्ने मितिको विषयमा कुरा मिलेन र काम गर्ने वातावरण मिलेन। जब मैले सडक – २ बनाउन लागेको थिएँ, तब आलिया र महेश भट्टले भने कि ‘सुशान्त काम गर्न चाहन्छन्, उनलाई भन।’ सुशान्त एकपल्ट फेरि पनि कार्यालय आए र उनीसँग कुराकानी भयो। त्यो समयमा सुशान्त र उनको जीवनको बारेमा धेरै विषयमा कुराकानी भयो। यही कुराकानीको समयमा मलाई लागेको थियो कि सुशान्त धेरै छटपटिएको आत्मा थियो। मैले सुशान्तलाई भने कि ‘हेरौँ कसरी अगाडि बढिन्छ।’ तर अन्तिममा सडक – २ मा पनि काम गर्न मिलेन। सुशान्त मलाई अस्थिर युवा लागेका थिए।’
मुकेश भट्टले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले करियरको शुरुवाती दिनमा परविन बाबीसँग काम गरेको थिए। परवीनलाई ‘सिज्रोफिनिया’ थियो। त्यतिबेला मैले सुशान्तलाई भेट्दा उनी परविनको बाटोमा हिँड्न लागेको जस्तो अनुभूति भइरहेको थियो। सुशान्त मानसिक समस्याको कारण चिकित्सकको सम्पर्कमा थिए भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा भयो। मसँग उनको दुईतीन पल्ट भेट भयो तर त्यतिबेला मलाई उनी अस्थिर लाग्यो। मैले उनलाई सोधेको थिए की ‘तिमी ठीक छौ ?’ तब उनले भनेका थिए, ‘हजूर सर, सबै ठीक छ।’
मुकेश भट्टसँगको कुराकानीको यो अंश समेटिएको भिडियो सामग्रीलाई रिट्विट गर्दै केन्द्रिय मन्त्री बाबुल सुप्रियोले लेखेका छन्, ‘मुकेश भट्टजी, तपाईको यो कुरा सुनेर म व्यथित छु। तपाईँ साथी हो तर यति सजिलै तपाई यो कुरा कसरी भनिराख्नु भएको छ, ‘तपाईलाई थाहा थियो र तपाईलाई हैरानी भएन!’ आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको कारण सुशान्तलाई सडक २ र आशिकी २ मा मौका दिनुभएन । तर यो दुखद कुरा हो की उनका पिताको उमेरका तपाईले सुशान्तलाई सहयोग गर्नुभएन।’
हेयर स्टाइलिस सपना भावनानीले ट्वीटरमा सुशान्त, धोनी र आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखिन्, ‘सुशान्त केही समस्यासँग जुधिरहेका थिए।’ सपनाले अगाडि लेखेकी छन्, ‘यो कुनै लुकाइएको कुरा थिएन की सुशान्त पछिल्लो केही वर्षदेखि अफ्ठेरो अवस्थामा थिए। कसैले सुशान्तको साथ दिएनन्। सहयोगको लागि कोही पनि अगाडि आएनन् र आज हर कोही ट्विटरमा दुख व्यक्त गरिरहेका छन्, यसले सहजै अर्थाउँछ, इन्डस्ट्री कति खोक्रो छ। यहाँ कोही पनि तपाईँको साथी हैन।’
(श्रोत अन्नपूर्ण र देश संचार)